10 နေ့ရက်များဆွစ်ဇာလန်ခရီးသွားခရီးစဉ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 နေ့ရက်များဆွစ်ဇာလန်ခရီးသွားခရီးစဉ်
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 31/12/2019)
အသည်းအသန်ခရီးသွားများအတွက်ကကောင်းတစ်ခရီးစဉ်ရှိသည်ဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်သိကြ. မြေပုံမှာအကောင်းတစ်ဦးကြည့်နှင့်အတူ, အစိုင်အခဲ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အစီအစဉ်, နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အံ့သြဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများ - သင်သည်သင်၏အဘို့သတ်မှတ်ထားပါတယ် 10 ရက်ပေါင်းဆွစ်ဇာလန်ခရီးသွား. တဖန်သင်တို့မှတဆင့်ခရီးသွားလာနေသည့်အခါ ဥရောပ, ရထားနီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုငျသညျယူနိုင်ပါသည်. တိုင်းပြည်နှင့်အတူထုပ်ပိုးကြောင့်ဆွစ်ဇာလန် explorre ရန်ဆန္ဒရှိသူများသည်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိသည်ဖို့လိုအပ် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာမြင်ကွင်းများ. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အတူတက်လာမယ့်အကူအညီနဲ့သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်ခဲ့လျှင်, ကြည့်ကြမယ့်ပါစေ 10 ရက်ပေါင်းဆွစ်ဇာလန်ခရီးသွားခရီးစဉ်:
နေ့ 1 သင့်၏ 10 နေ့ရက်များဆွစ်ဇာလန်ခရီးသွားခရီးစဉ် – ဂျီနီဗာ
ဘယ်မှာသငျသညျအရပျ သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစတင်ရန် ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့နေထိုင်၏ကျန်များအတွက်သေံသတ်မှတ်ထား. မြို့ကြီးများတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာဖြစ်သောကြောင့်အများစုမှာခရီးသွားများအတွက်ဂျီနီဗာသို့မဟုတ်ဇူးရစ်ဖြစ်စေများတွင်စတင်အကြံပြု. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, သငျသညျချင်ပါတယ်လျှင်သင်နောက်ပြန်ဤခရီးစဉ်ကြိုးစားနိုင် - သောအရာကိုအရေးကြီးပါတယ်ပျော်စရာရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်!
သင်ပထမဦးဆုံးဂျီနီဗာသို့ဆင်းသက်ခဲ့လျှင်, ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၌သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးနေ့၌ကြည့်ဖို့အမှုအရာများစွာသောလူလည်းမရှိ. ကျနော်တို့ဟောငျးမြို့နှင့်စီးတီးစင်တာတွင်နိုင်ငံတွေကိုခရီးလှအကြံပြု. ထို့အပြင်, အဆိုပါ Treille Promenade နှင့်ကုလသမဂ္ဂထိုင်ခုံလည်းရှိပါတယ် ကြီးမြတ်မြင်ကွင်းများ.
နေ့2– ရေကန်ဂျီနီဗာ
ဂျီနီဗာရှိစတင်ခြင်းသင်အနည်းငယ်ပိုရှည်ရေကန်ဂျီနီဗာတဝိုက်ကပ်ရန်ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း. ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ဒုတိယနေ့အဘို့, က Montreux မြို့သွားရောက်စံပြပါလိမ့်မယ်, အနီးကပ်အိုင်မှအလတ်စား.
တိုတောင်းတယ် ရထားစီးနင်း ကွာဂျီနီဗာကနေ, ထိုသို့မြင်နေရကျိုးနပ်မယ့်. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ချစ်သောသူ အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် Chateau de Chillon နေဖြင့်ဝမ်းသာပီတိပါလိမ့်မည်, နှင့်သဘောသဘာဝချစ်သူများခြောလိမ့်မည် အိုင်ပျော်မွေ့.
နေ့3– Zermatt – အဆိုပါအဲလ်ပ်တောင်တန်း, ဆွစ်ဇာလန်
၏သဘာဝအလှတရားကိုမြင်လျှင်မပါဘဲဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအချိန်ဖြုန်း အဆိုပါအဲလ်ပ်တောင်တန်း တစ်ဦးမယ့်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်စားသောက်ဆိုင် နှင့်မည်သည့်အစားအစာမိန့်မပေး. အခါတစ်ဦးကလက်လွတ်ဖို့မလိုပါဖြစ်ပါသည် နံနက်စောစောမီးရထား Zermatt ရန်သင့်အားယူနိုင်ပါသည်. ထိုအရပ်မှ, အဆိုပါအဲလ်ပ်တောင်တန်း၌သင်တို့၏စွန့်စားမှုစတင်နိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါလျှင်လုပ်ဖို့ပဒေသာ Zermatt ရှိရဲ့ ရာသီဥတုအလုံအလောက်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ငါးယောက်ရေကန်ပတ်လည်မှာ3နာရီတိုးမြှင့်အကြံပြု, Blauherd အတွက်စတင်. သင့်ရဲ့အဲလ်ပ်တောင်တန်းစတင်လှပသောတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကြီးမြတ်လမ်းက အတှေ့အကွုံ.
နေ့4– Zermatt – တစျဖနျနေ့တွင်4၏ 10 နေ့ရက်များဆွစ်ဇာလန်ခရီးသွားခရီးစဉ်
သငျသညျအပြည့်အဝ Zermatt စူးစမ်းရန်သင့်သည်စတုတ္ထနေ့ရက်ယူနိုင်ပါသည်, ဒီသူတို့အားချစ်စရာကောင်းဆွစ်တဦးဖြစ်သကဲ့သို့ တောင်ပေါ် မြို့ရွာ. တစ်ဦးရှိပါတယ် ခမ်းနားမြစ် ကြည့်ရန်, နှင့် Matterhorn ကြည့်ရှုရန်. အမှု၌သင်တို့ကိုပိုပြီးအတွေ့အကြုံရင့် ခရီးသည်, သင်ကြည့်ရှုရန်နေ့လည်ခင်းယူနိုင်ခဲ့ ချားလ်စ် Kuonen ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားတံတား.
အဲဒီအတွက်, သငျသညျ Randa သှားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်, ဘယ်မှာတိုးမြှင်တံတားစတင်ရန်. ဒါဟာတစ်ဦး 2-နာရီတိုးမြှင့်အကြောင်းကိုဖွင့် တံတား. ဒါဟာဖြည့်စွက်ရန်လွယ်ကူသောလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူး, နှင့်တံတားကိုယ်တိုင်ကနှလုံးအမောများအတွက်မဟုတ်ပါ. သို့သျောလညျး, ကမြင်လျှင်ဒုက္ခထိုက်သည်.
နေ့5– Matterhorn Glacier
အပြည့်အဝအဲလ်ပ်တောင်တန်းတွေ့ကြုံခံစားရန်, သငျသညျမြင့်ပေါ်ရရန်အခွင့်အလမ်းကိုယူသင့်ပါတယ်. Zermatt ကြောင်းအဘို့ကြီးစွာသော Starting Point သို့ဖြစ်ပါသည်, သင်အလွယ်တကူအဲဒီမှာကနေ Matterhorn Glacier ပရဒိသုနှင့် Gornergrat နှစ်ဦးစလုံးကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့အဖြစ်.
ဒါဟာ Matterhorn ၏ထိပ်ရောက်ရန်အချို့ LIFT ကြာ ရေခဲမြစ်ပရဒိသု သို့မဟုတ် Gornergrat မှရထားစီးနင်း. နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤ တစ်နေ့တာခရီးစဉ် အဆိုပါအဲလ်ပ်တောင်တန်း၏စိတ်ကူးအမြင်များပူဇော်, တချို့ရှိရဲ့ ရှာဖွေစူးစမ်း သငျသညျရှိနေတခါလုပ်ဖို့, လွန်း.
Chur ရထားမှ Bern
နေ့6– Schilthorn ဆွစ်ဇာလန်
သင့်ရဲ့ဆွစ်ဇာလန်ခရီးစဉ်များ၏ဆဋ္ဌမနေ့အဘို့, ကနေတချို့ပိုပြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားသည့်အမြင်များဖမ်းရန်အချိန် Schilthorn. Murren ထံမှ Schilthorn တစ်ကေဘယ်ကားကိုအမီလိုက်နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ထားပြီးအရာအားလုံးကိုပျော်မွေ့. တစ်ဦးကလှည့်စားသောက်ဆိုင်, ကြည့်ရှုပလက်ဖောင်း၏ပဒေသာ, ပင်စဘွန်းကမ္ဘာ့ဖလားအားလုံးကဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်.
Schilthorn တစ်ခုလုံးကိုနေ့ကဖြည့်စွက်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်, သို့သော်သင်ခံစားနေလျှင် စွန့်စား, အဖြစ်ကောင်းစွာ Lauterbrunnen ထုတ်စစ်ဆေး. ဒါဟာတောင်ပေါ်ရေတံခွန်များ၏နည်းနည်းရွာမှတ်တိုင်များနှင့်အမြင်များနှင့်ပြည့်ဝ၏တစ်ဦးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ချိုင့်ဝှမ်းမှတဆင့်တစ်တိုးမြှင့်ဖွင့်.
နေ့7– Jungfrau ဒေသ
နေ့7အဆိုပါ Jungfrau ဒေသရန်သင့်အလည်အပတ်ခရီးရှည်ရှည်အဘို့စုံလင်ခြင်းရှိနှင့်အဲလ်ပ်တောင်တန်းရှာဖွေစူးစမ်းစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်. သငျသညျ Grindelwald ထံမှယူနိုင်ကြောင်းအချို့သောလူကြိုက်များတောင်တက်လမ်းကြောင်းရှိပါတယ်. တစ်ဦးကကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုပထမဦးစွာတောင်ရန်သင့်အားယူနိုင်ပါသည်, သငျသညျမြားစှာရရှိနိုငျတောင်တက်လမ်းကြောင်းများထဲမှကောက်လို့ရပါတယ်ဘယ်မှာ.
လူကြိုက်အများဆုံးသောသူတို့၏တစ်ခုမှာခြောအဆိုပါဖြစ်ပါသည် Bachalpsee ရေကန် ခရီးသွား, လှည့်ပတ်ကြာမယ့်ပတ်ပတ်လည်ခရီးစဉ်အရာဖြစ်ပါသည်2နာရီ. သို့သျောလညျး, သည်အခြားလှုပ်ရှားမှုများကိုများများပထမဦးစွာရှိရဲ့, ဒါကြောင့်သေချာကောင်းကောင်းဧရိယာနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရစေ.
နေ့ 8 – Wengen
သင့်ရဲ့အဋ္ဌမနေ့အဘို့ခြေရင်း 10 ဆွစ်ဇာလန်ခရီးသွားရှာဖွေစူးစမ်းနေ့ရက်များ Wengen နိုင်ပါတယ်, သေးငယ်တဲ့တောင်ပေါ်မြို့. ထိုဒေသတွင်နေစဉ်, သငျသညျတောငျပျေါကိုတက်မယ့် cable ကိုကားတစ်စီးယူပြီးနှင့်လမ်းကြောင်းတောင်တက်ခြင်းဖြင့် Mannlichen စူးစမ်းလေ့လာနိုင်. အချို့သော intriguingly အမည်ရှိသောသူတို့ကိုရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောတော်ဝင်လမ်းလျှောက်အဖြစ်.
Mannlichen ကနေ Kleine Scheidegg ဖို့ Panorama Trail ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည် အများဆုံးသာယာလှပ တစ်. ဒါဟာကမ်းလှမ်း အမြင်များ အဆိုပါ Jungfrau - အောက်ကချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်သုံးကျော်ကြားတောင်ကို, Monch, နှင့် Eiger. Kleine Scheidegg ကနေ, ရထားယူ နောက်ကျော Wengen မှ.
နေ့9– Lucerne
သင့်ရဲ့၏အဆုံးရန်နီးစပ် 10 နေ့ရက်များဆွစ်ဇာလန်ခရီးသွားခရီးစဉ်, သင်သည်သင်၏လမ်းဖြစ်စေလိုပါလိမ့်မယ် ပြန်မြို့ကြီးများသို့.9နေ့ရက်သည်, ကျနော်တို့ Lucerne တစ်ဦးအလည်အပတ်အကြံပြု, ကခြေသည်အပေါ်စူးစမ်းဖို့ပြီးပြည့်စုံသောမြို့ဖြစ်၏အဖြစ်. လူအပေါင်းတို့သည်တောင်တက်ပြီးနောက်, ကရိုးမ်ဟာတစ်ဦးအားရစရာဖြစ်သွားမယ့် မြင်ကွင်းများ၏ search အတွက်လမ်းများ စိန့်များ၏ဘုရားကျောင်းနဲ့တူ. Leodegar, Museggmauer နှင့်ခြင်္သေ့ Monument.
Lucerne လှပသောအထင်ကရအဆောက်အများစွာသော riverfront နှင့်ပဒေသာရှိပါတယ်. ထို့အပွငျ, ကဇူးရစ်ဖို့သင့်ခရီးစဉ်အပေါ်တစ်ဦးအကြီးရပ်တန့်မယ့်, သင်သည်သင်၏အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ အလည်အပတ်.
နေ့ 10 – ဇူးရစ်နှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးသောနေ့၌ 10 နေ့ရက်များဆွစ်ဇာလန်ခရီးသွားခရီးစဉ်
သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်အပြည့်အဝတစျခုဖွစျသငျ့သ, နှင့်ဇူးရစ်အထဲတွင်ဖြုန်းဖို့တစ်ခုစံပြနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ယင်း၏အများအပြားတွေ့မြင်ရမည့်အချိန်ကိုသုံးပါ သမိုင်း ရူထောင့်များ, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် ဘုရား Grossmunster နှင့် Fraumunster ၏.
ဇူးရစ်ကိုလည်းယင်း၏ရှိပါတယ် ကျြောစောသော စျေးဝယ်လမ်း ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှ, ဒါကြောင့်သင် Bahnhofstrasse မှာတစ်ခုခုဝယ်ဖို့သေချာအောင်. ဟောငျးမြို့မှတဆင့် Walk နှင့်သင်အိမ်ပြန်ခေါင်းမတိုင်မီရှာဖွေစူးစမ်းပျော်မွေ့.
သငျသညျဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံလုပ်ဖို့ကိုရှေးခယျြဘာပဲ, သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏အချိန်ရှိသည်သွားကြသည်. ကိုယ့်လှုပ်ရှားမှုများစီစဉ်ဖို့သတိရပါ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, နှင့်နေထိုင်၏အရှည်ဂရုတစိုက်. သင့်ကြောင်းသေချာပါလိမ့်မယ် အားလပ်ရက်များ လုပ်ရတဲ့-အခမဲ့နှင့်အမှန်တကယ်အားမစိုက်ရ, ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်အဖြစ်.
ဆွစ်ဇာလန်တိုင်းခရီးသွားတွေ့ကြုံခံစားရန်လိုအပ်ပါသည်လှပတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား 10 နေ့ရက်များဆွစ်ဇာလန်ခရီးသွား? စာအုပ် သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေ ယခုကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂုဏ်အသရေများကသုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်ကိုခံရပါစေ!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 နေ့ရက်များဆွစ်ဇာလန်ခရီးသွားခရီးစဉ်” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-days-switzerland-itinerary%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#traveleurope europetravel SwissAlps trainjourney ရထားခရီးသွား travelswitzerland